Arabia Saodita: Mihidy Ho An’ireo Vehivavy Mpihazakazaka Ireo Làlana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Mey 2017 21:17 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Nederlands, Français, Deutsch, македонски, 繁體中文, 简体中文, Español, English
(Fanamarihana: Ity dia lahatsoratra nivoaka tamin'ny Mey 2010)
Vao haingana izay, noraràna ho an'ireo vehivavy mpihazakazaka ny làlana iray any amin'ny Faritanin'i Asir, ao Arabia Saodita, izay toerana tian'ireo vehivavy maro anaovana fanazarantena, satria heverin'ny Haia (Vaomieran'ny Fampiroboroboana ny Fahamaotinana sy ny Fisorohana ny Havetavetana) ho mampidi-doza.
Nilaza ny Haia fa ny tsy fahampian'ny hazavàna sy ny fahafantarana io faritra io ho be mpanao asa ratsy no antony nanakatonana azy: araka izany dia nakatona izy mba hiarovana ny vehivavy. Kanefa, maro amin'ireo mpitoraka blaogy no tsy miombon-kevitra amin'io fanambarana io, milaza fa misy antony hafa ao ambadik'ilay fanakatonana.
Miangavy i Ahmed Faraz Rao, mpaneho hevitra ao amin'ny Arab News momba ity raharaha ity:
Raha toa ka mampidi-doza ny vehivavy ity toerana ity dia mba ataovy izay analàna izany loza izany fa tsy ny vehivavy no raràna tsy hihazakazaka.
Raha misy toerana mampidi-doza ny vahoaka dia tokony handao izany toerana izany ve izy ireo, sa ny mpitandro filaminana no tokony handray fepetra mba hampandry fahalemana izany?
Mampitaha ilay fanapahankevitra amin'ny iray avy aminà vondrona “mpisoroka heloka bevava” any aoriana i Saudi Jeans, izay manamarika fa sady voatsilo tsara no tsy misy atahorana io làlana io araka ny voalazan'ireo mpihazakazaka any amin'ilay faritra,
Azo lazaina ho ampahany aminà paikady fisorohana ity fanapahankevitra ity, izay manome tsiny amin'ny ampahany ny iharam-boina. Raha tokony hijery ireo faritra mampidi-doza sy hiaro ireo vehivavy amin'ny alàlan'ny fisamborana izay olona mitady hampijaly azy ireo no ataony, dia aleon'izy ireo mandrara ny fanaovan'ireo vehivavy fanazarantena any…Mazava ho azy fa tsy vaovao na mahagaga intsony ny fihetsika tahaka izao ankehitriny any amin'ny faritr'i Haia…
Eny tokoa, manamarika i American Bedu fa tsy vao voalohany izao fanapahankevitra izao:
Efa nisy ny firotsahan'ireo minisitry ny governemanta manoloana ny vehivavy sy ny fanazarantena. Tamin'ny herintaona, maro tamin'ireo toerana fanaovan'ny vehivavy fanazarantena no voalaza ho tsy manara-dalàna raha tsy nahazo fanekena avy amin'ireo minisitra. Raha tokony jerena ho toeram-barotra izy ireo, satria dia toerana hanaovan'ny vehivavy fanazarantena fa tsy hiantsenany na koa hikolokoloany volo, dia ilaina kosa ny fahazoandàlana avy amin'ny governemanta.
Ary tohizany amin'ny fanononana ireo hasarotan'ny fihazonana vatana tomady ho an'ny vehivavy any Saodia Arabia ny resaka:
Maro amin'ireo sekoly Saodiana, any amin'ny ambaratonga voalohany sy faharoa, no tsy mampanao fanazarantena ho an'ny ankizy. Tsy entanina mba hanao fanatanjahantena ny vehivavy. Raha tsy tena maharisika sy mahafehy tena hitaiza vatana ao an-tranony ny vehivavy, dia tsy ny vehivavy rehetra kosa no afaka mandamina moramora ny fandaharampotoanany mba hivoaka sy hanao dia an-tongotra na handamina ny fitaterana sy handoa ivotoerana fanaovana fanazarantena voatokana. Etsy andaniny, afaka mivoaka manao kilaoty fohy tsotsotra ny lehilahy ary mihazakazaka araka izay tiany. Betsaka ireo ivotoerana fanaovana fanazarantena ho an'ny lehilahy. Afaka tazanin'ny rehetra ireo ivotoerana fanaovan'izy ireo fanazarantena eny an-dàlambe ary mahita ireo lehilahy manao fanatanjahantena avy eo amin'ny varavaram-pitaratra lavabe izay mahazatra ho an'ireny toerana ireny.
Milaza ihany koa i American Bedu fa tsy rendrarendra avokoa ny fihazonana vatana tomady, fa resaka fahasalamana. Namafisina ity teboka ity tao anatin'ireo fanehoankevitra ato amin'ity lahatsoratra ity izay ilazan'ny mpaneho hevitra, Abu Sinan, fa:
Iray amin'ireo antony mahatonga ny olana goavana eo amin'ireo vehivavy voan'ny diabeta izao. Tsy misy fanazarantena, ny sakafo tsy ara-pahasalamana, mandray anjara ao avokoa izany rehetra izany.
Mandritra izany fotoana izany, manao tsikera lany henatra kokoa mikasika io raharaha io i Qusay ao amin'ny blaogin'i Saudi Jean:
Te hiloka aho fa misy olona mivarotra fitaovana fanaovana fanatanjahantena an-trano ary miezaka mandrara ireo hetsika rehetra fatao any ivelany mba hahafahany mahalafo bebe kokoa.